RIP: Frank Batten Sr - Bhiriyoniire Wausina Kumbonzwa Nezve | Martech Zone
RIP: Frank Batten Sr - Bhirionea Wausina Kumbonzwa Nezvo
Chipiri, Gunyana 15, 2009 Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Douglas Karr
Vanhu vazhinji havana kumbonzwa nezvaFrank Batten Sr kunze kweHampton Roads, Virginia. Pandakatanga kusiya Mauto eU.S. uye ndichienda kunoshanda kuVirginia-Pilot, hapana chandakanzwa kunze kwezvinhu zvikuru kubva kuvatori venhau vaishandira bepanhau pavaitaura nezvazvo. Frank Sr. Aizivikanwa nekuuya kune vekutsikirira uye kutaura navo nevashandi vese - vazhinji vacho vaaiziva nemazita kusvikira makambani ake akura zvakanyanya.
Kwemakore mazhinji, Landmark vashandi vakatora zuva ravo rekuzvarwa uye vakagamuchira maviri evhiki mabhonasi paKisimusi. Nguva padzakaoma kana madhipatimendi akapetwa, hatina kusiya basa - vashandi vakazvipira kuenda pamudyandigere kana kuendeswa kune dzimwe nzvimbo mukambani. Zvaigara zviri zvevashandi naFrank.
Kana Landmark Kutaurirana ikatora hwakazara hwemanejimendi manejimendi, yakanangwa sarudzo yekuhaya, uye zvinoramba zvichivandudza zvirongwa, mamaneja ese akapinda kuburikidza neese rovedzo yavaida. Makore makumi maviri apfuura, ndakatoenda kunodzidziswa hutungamiri hukuru uye ndakasangana naFrank pachangu. Mumakore mashoma mashoma, ini ndakawana hunyanzvi hwehutungamiriri uye manejimendi pane vanhu vazhinji vane mabasa avo ese. Frank akatenda kuti vashandi varinani vakadzidza uye vanorapwa, zvirinani kuita ikambani. Zvakashanda.
Panguva iyoyo, Frank aive azvidzidzisa kutaura nekugeda mushure mekunge arasikirwa nenzwi rake kugomarara repamuromo. Iwe wainyatsonzwa izwi rake. Mumwe munhu akabvunza, "Marii yakakwana, Frank?" uye mhinduro yake yaive yekuti yanga isiri yemari - yaive yekuchengetedza ramangwana rekambani uye kufunga nezvemhuri dzese dzaive nedenga pamusoro padzo.
Iyo nyaya inonakidza kwazvo yakataurwa naFrank yaive kuvhurwa The Weather Channel. Sezvakanaka sezvazvinonzwika, kambani iyi yaibuda mari uye Frank akati aive nemaputi epinki emunhu wese mutangi rake. Akatora mukana, zvakadaro, ndokutaurirana muripo wega wega pamakambani emakambani akachinja iyo indasitiri yese! Yakatangisa imwe yenzira dzakabudirira kwazvo muTV terevhizheni. Dai anga asiri kurwisa kenza yehuro, isu tingave takave neLandmark News Network pane Ted Turner's CNN.
Vanhu havazive nezvaFrank Batten nekuti aive akanyarara, ane hunyoro philanthropist. Ndinoyeuka apo kambani yakamanikidza Frank kumutsidzira mahofisi ake uye kubvisa pasofa yakarohwa uye tafura yaaive nayo kwemakore akawanda kudaro. Aive shasha yechokwadi kukambani, kunharaunda uye kunyangwe vanhu. Munguva yekuparadzanisa, akaisa hupenyu hwake panjodzi uye akaramba achitaura nekuda kwekubatanidzwa nekuti chaive chinhu chakakodzera kuita.
Izuva rinosuruvarisa kwandiri uye nyaradzo yangu inoenda kumhuri yake, kunyanya Frank Batten Jr.Ndinodada kuti ndakasangana naFrank Batten, Sr. Kana ndichiyera kubudirira kwevanhu, zvinowanzo kupesana nezvandinorangarira nezvaFrank. Aive nemwero, achishanda nesimba, aionga, aibata vashandi vake mushe mushe mushe, uye achiri kugona kusimudzira mabhizinesi ake zvisingaite. Hapana akamboyera uye handina chokwadi kuti chero munhu achazombozviita!
Read more nezve hupenyu hunonakidza hwaFrank Batten sezvakanyorwa naEarl Swift kuVirginia-Pilot. Frank Batten Sr aive bilionea iwe waungangodaro usina kumbonzwa nezvake - asi iwe unogona kudzidza zvakawanda kubva pahupenyu hwaakatungamira.
Mufananidzo kubva kuVirginia-Pilot
Tags: billionaireakajeka batten srchiratidzo chakakoshaphilanthropistphilanthropyvirginian-polotmamiriro okunze
Vaka Blog Traffic neCourse uye Kero yechipiri
Kugamuchirwa kuThe 2009 Marketing Tech Blog
Sep 16, 2009 na2: 47 PM
Doug, uyu mutero unoshamisa kune mumwe munhu uyo ​​zviri pachena kuti akabatsira kukuumba iwe. Isu tose tinofanirwa kuve nerombo rakanaka sekuve ne "Frank" yekutarisa kumusoro mumabasa edu!